Inkampani iphrofayela - Full CNC Machine Ithuluzi Co., Ltd.
Drilling futhi u- isikhungo
ingcindezi High yokuhlanza umshini
Ovundlile machining isikhungo
Kuqondile machining isikhungo
Full CNC Machine Ithuluzi Co., Ltd. yasungulwa ngo 2006. Kuyinto zobuchwepheshe zanamuhla ukuphathwa kwebhizinisi onguchwepheshe nokuhlanganiswa ucwaningo, intuthuko, izimboni, amapulazi akhiqiza yokuthengisa emva-sales service of CNC machining izikhungo, nokungenisa futhi ukuthekelisa amalungelo . Le nkampani elise e Wenzhou, Umkhawulo wama-East China Sea nemnotfo athuthukile. Ihlanganisa indawo 35 Mu futhi uye wenza okungaphezu 25,000 metres square zifane ifektri izakhiwo. With ezingaphezu kuka-100, zobuchwepheshe, eliphezulu abasebenzi professional abaqeqeshiwe.
Full CNC Machine Ithuluzi Co., Ltd. izimisele ifilosofi zebhizinisi "isayensi nobuchwepheshe njengoba ehamba phambili, ubuchwepheshe njengoba ehamba phambili, emakethe ngamakhasimende". Nyusa umoya ukusebenzisana of "sibambe wonke amandla, ufune ukuwenza kahle futhi ekubekeni bantfu phambili", banamathele inqubomgomo yamasu ephezulu yekucala, utshalomali okusezingeni eliphezulu nobuchwepheshe okusezingeni eliphezulu, futhi zilandelana ukwethula phezulu rigidity mechanical evundla mpo CNC machining izikhungo futhi CNC imishini umshini uchungechunge nge elungiselelwe umklamo. Le nkampani ine eziphambili super ezinkulu CNC pentahedron processing isikhungo emhlabeni futhi gantry super eside futhi ububanzi CNC nojantshi Sander futhi ngokunemba high imishini Renishau sokuhlola. Ukunamathela wumgomo ibhizinisi "Quality Kuhle, Mutual Benefit Inani Nenkonzo aqotho", inkampani ihambelana nemithetho inqubomgomo izinga "Quality Okokuqala, Customer Okokuqala", futhi ngenhliziyo yakhe yonke inikeza inkonzo enhle kakhulu kumakhasimende ethu.
Sizosebenzisa okungcono umkhiqizo izinga ukukhonza kangcono amakhasimende nabangane, uqine niqinile, nizithibe izinga umqondo, sisekela umoya professional, ukugxila izinzuzo core, ukuphishekela eliphezulu, ubuhle, ukuvumelana. Kuyinto siphishekela okuphakade ngokuqhubekayo ngcono ukubaluleka amabhizinisi ngesevisi eliphezulu.
Imikhiqizo Okufakiwe - Tags Zezıhlabane - Sitemap.xml - AMP Ucingo
Kuqondile Machining Centre, Cnc Vertical Machining Centre, Vertical Machining Centre, Wheel Hub Machining Centre,